I-China izinkulungwane eziyishumi zezinwele zokuxubha izinwele zenzelwe kahle azikwazi ukulimaza ifektri yezinsini nabakhiqizi | Enyuan
izinkulungwane eziyishumi zezinwele isixubho zenzelwe kahle akakwazi ukulimaza izinsini
Izinkulungwane eziyishumi zezinwele zethu zamazinyo zisebenzisa ubuchwepheshe obukhulu bokutshala imbobo eyisikwele, ama-bristles aphindaphindiwe ngobumnene obuhlukile, enza isayensi ye-cryptographic, asakaze ngobunono ukugoqa amazinyo, izinsini zokubhucunga umzimba, kanye nengcindezi yezinsini
igama lomkhiqizo ibhulashi lamazinyo eliyizinkulungwane eziyishumi
Izinto zokubamba ibhulashi TPU
Ibhulashi ububanzi Usayizi: 0.127mm
Thuthukisa ucwaningo nentuthuko, emisha kabanzi
Umkhiqizo wethu uvuselelwe futhi wathuthukiswa ukugcina izikhala eziningi zokukhipha ukubuyela emuva. Usebenzisa ubuchwepheshe bokutshala obuminyene obukhulu obuyisikwele, kuhlanzekile futhi kuphephile lapho uxubha.
Isibambo sebhulashi lekhwalithi
Isibambo sebhulashi esisiklanyile sisekelwe kumthetho we-ergonomics, ongangena entendeni yesandla ngokubamba okunethezekile. Kuyonga abasebenzi, kuyashintshashintsha futhi kunethezekile ukuyisebenzisa.
Izinzuzo zomkhiqizo; ama-bristles ayizinkulungwane eziyishumi aphakeme futhi anethezekile, ukusebenza kahle okukhulu nokusebenza okuningi, ukunambitheka kukotini, imicu yamabhulashi acwebe kakhulu, amancane njenge-0.127mm. I-soft and super soft, bristles doubleness bristles, bopha ngobumnene amazinyo, uhlikihla izinsini ngaphandle kokulimaza izinsini. Inhloko yebhulashi iyanwetshwa ukukhulisa indawo oxhumana nayo nendawo yamazinyo, futhi ukuhlanzwa kusendaweni.
Izinyathelo zokuphepha zokusebenzisa ibhulashi lamazinyo Ngokuqina kwebhulashi lamazinyo kanye nempilo yakho, khumbula ukomisa isixubho njalo uma uxubha amazinyo. Ngemuva kokusebenzisa ibhulashi lamazinyo isikhathi esithile, lizoqoqa inani elikhulu lamagciwane, isikhunta kanye nezilwanyana ezincane. Ngemuva kokuxubha amazinyo, faka ibhulashi lamazinyo ngaphansi kompompi bese ulihlikihla ngamandla ukulihlanza, bese usetha ibhulashi lamazinyo lome. Lapho ufaka amabhulashi amazinyo amaningi, ungathintani ukuvimbela amagciwane abandayo noma omkhuhlane ukuthi angasakazeki emabhulashini. Ukufaka ishelufu ekhaya elingabeka amabhulashi amazinyo amaningi mpo akubizi kakhulu, kepha kuhle empilweni yomndeni wonke.
Langaphambilini Ikhwalithi ephezulu yasekhaya nano isixubho sasekhaya
Olandelayo: I-Couple intambo ethambile ibhulashi lamazinyo